Baby Name Guesser - the first name Zimbabwe - analysis of first names, popular boy and girl names, male names, female names
Based on popular usage, it is 5.619 times more common for Zimbabwe to be a girl's name.
The popularity of Zimbabwe is: 4.694
Listing of some deceased famous people named Zimbabwe:
Names with similar statistics to Zimbabwe:
Similar sounding names to Zimbabwe:
Get the meaning of the name Zimbabwe.
When naming your baby Zimbabwe, it's important to consider the gender of the name itself. When people look at the name Zimbabwe, they might ask the question, "is Zimbabwe a man or a woman?", or "what is the gender of the name Zimbabwe?" Some names are more gender neutral than others, and some names are more strongly associated with either males or females. Some spelling variations of the name Zimbabwe might be more popular than others. The Baby Name Guesser can answer all these questions about the name Zimbabwe. To find out more about Zimbabwe, Baby Name Guesser uses up-to-date data from across the Internet on how the name Zimbabwe is actually used.